Adeegga Qorista Muddada: Kireynta khadka tooska ah Qorahaaga Qormada Qoraalka ee Soomaaliya
Adeegga Qorista Muddada ee Soomaaliya si loogu guuleysto natiijooyinka laba jeer ka dhakhso badan!
Qorayaal aqoonyahano aqoon leh iyo 24/7/365 taageero, ayaa hadda laga heli karaa Soomaaliya! Waxaan bixinnaa adeegyo Adeegga Qorista Qoraalka ah waxaanan daryeelaynaa waqtigaaga iyo arimahaaga gaarka ah
Faa'iidooyinka Shaqaalaynta Adeeg Adeeg Qoraal Qoraal ah
Waraaqaha mudada, sida arday kasta oo u fariistey mid ka mid ah ayaa kuu sheegi kara, waxay noqon kartaa khibrad xoog leh oo caajis badan. Taasi waa sababta ay Saaxiibbo badan oo Waraaqo ahi u bilaabeen inay bixiyaan adeegsi qorista warqad xilliyeed, maaddaama aan wada ognahay waxa ay u eg tahay in si buuxda loo dareemo dhammaadka muddada. Iyo inaad si sax ah u hesho, xitaa warqaddaada ugu horreysa, waa muhiim. Kaliya maahan inay ka caawiso macalinka inuu arko shaqadaada, laakiin waxay caawisaa ardayda kale sidoo kale.
Waraaqaha muddada waxaa lagu qoraa mowduucyo loo tixgelinayo mowduuc, taasoo la micno ah in laga qoray mowduucyo xilligan la joogo la qorayo. Waxaa loo qoray in lagu sameeyo qorista heerka tacliimeed, kuwa loogu talagalay kuwa heerka tacliimeed. Dabcan waxaa jira qormooyin aad u wanaagsan oo lagu qoro heer kulleejo ama heer jaamacadeed, kuwaas oo sidoo kale ah mowduucyo. Si kastaba ha noqotee, sidaan marar badan horay u sheegay, si aad u ballaaran, qormooyinka heerka tacliinta waxaa lagu sameyn karaa midkood dugsi sare ama heer kulleejo. Xeerar isku mid ah ayaa lagu dabaqayaa.
Marka qormo noocee ah ayuu qofku isticmaali karaa markay raadinayaan Warqad Wadahadal ah oo ay ugu qorayaan qoraalkooda? Hagaag, ugu horreyntii, sidaan hore u sheegnay, heerka tacliinta, in kasta oo ay tahay mid lagu soo jiito in qoraalkaaga lagu qoro jaamacadda, waa meel aad uga wanaagsan in laga bilaabo. Qoraallada heerkan ah waxaa lagu sameeyaa heer shaqsiyeed. Waa inaad kala hadashaa qoraaga waxa aad rajeynayso inaad ku guuleysato qormada, waxayna u baahan doonaan inay xoogaa fikrad ah ka yeeshaan yoolalkaaga si ay kaaga caawiyaan inaad gaarto.
Marka labaad, markaad raadineyso adeeg qoraal xilliyeed ah, si taxaddar leh uga fikir inta aad rabto inaad mashruuca qaadatid. Adeegyada qaar waxay qori karaan oo keliya waraaqaha teeramka ee heerarka qalin jabinta ama heerka koowaad. Haddii aad tahay arday jaamacadeed, markaa waa la fahmi karaa inaad rabto inaad waxbadan ka dhiibato waxa ku jira iyo qaabka qormada. Si kastaba ha noqotee, ardayda qalin jabisa sida caadiga ah ma qoraan waraaqaha teeramka.
Adeegga qorista ereyga gaarka ah, dhinaca kale, waa qof taariikh ku leh qorista tacliinta. Xitaa waxaad dhihi kartaa adeeggu waa sida macallin oo kale. Sababtoo ah adeeggu waa mid caadadiisu qoran tahay, waxaad weydiin kartaa tusaalooyin gaar ah waxaadna raaci kartaa tilmaamaha saxda ah ee ay dhigayaan macallimiintaadu. Qaabkan, waxaad ku hubin kartaa in curiska aad soosaartay uu yahay midka ugu habboon shuruudahaaga, iyo inuu ka tarjumayo shaqadaada si aad u wanaagsan.
Tixgelinta seddexaad ee xulashada ereyga qorista ereyga waa kooxda taageerada macaamiisha. Waxay u egtahay inaad adigu qoridoonto qormada kaligaa. Tani waxay noqon kartaa hawl aad u cabsi badan, gaar ahaan haddii aadan si gaar ah xirfad ugu lahayn luqadda Ingiriisiga. Sidaa darteed, adeegga aad dooratay wuxuu u baahan yahay inuu helo koox qorayaal ah oo awood u leh inay ku siiyaan jawaab celin ku saabsan shaqadaada si loo hubiyo inay ku habboon tahay baahiyahaaga. Qorayaasha tayada wanaagsan waxay yaqaanaan sida loo sameeyo talooyin ku saabsan sida loo hagaajiyo qormada si aad uhesho fursadaha ugu badan ee aad kuheli karto wax soo saar guul leh oo xiise leh.
Ugu dambeyntiina, waa inaad sidoo kale tixgelisaa sida loo qiimeyn doono warqadda cilmi-baarista. Ardayda fasalka maanta badankood waxay ku qiimeeyaan eray-bixinnada erayga miisaanka u dhexeeya 'gudb' illaa 'sabool'. Maaddaama ardayda kaladuwan ay qaataan isla meeleynta, waxaa muhiim ah in adeegga aad shaqaalayso uu awood u leeyahay inuu kuu abuuro fasallo kala duwan oo meelayn ah. Tani waxay ku siin doontaa fursadda ugu wanaagsan ee lagugu dareemi karo laguna tixgelin karo deeq waxbarasho ama warqad cilmi baaris ah oo aad dooratay.
Doorashada adeegga qoraalka qoraalka waa hab fiican oo lagu hubiyo inaad heleyso waraaqda ugu fiican ee suurtogalka ah. Adeegyada badankood waxay leeyihiin kooxo qorayaal ah oo diyaar u ah diyaarna u ah inay qoraan waraaqaha teeramka maalinta oo dhan. Waxay marin u heli karaan boqolaal, hadaanay kumanaan ahayn, mowduucyo iyo noocyo waraaqo ah. Intaas waxaa sii dheer, way ka warqabaan nidaamka qiimeynta ee inta badan kulleejooyinka iyo jaamacadaha ay isticmaalaan. Ayadoo ay sannado badan oo waayo-aragnimadooda ah inay dib u taageeraan, waxay hubaal u yihiin inay awood u yeelan doonaan inay kuu helaan shaqo heer sare ah markasta.